Iindaba -Ukuba ndingacebisa imveliso inye yokhathalelo lolusu, ndingacebisa ibhotolo yeShea ngaphandle kokuthandabuza!
Ukhathalelo lobuso serum / Essence
Ukunyanyekelwa kwenyawo zakho
Ukupholisa komzimba kunye nokubanda okubandayo
Iinwele ezincinane ezisikiweyo
Iwigi enkulu yamaza
Iwigi yeenwele ezinde ezithe nkqo
Iwigi emfutshane yeenwele
I-Puppy thanda iwigi yeenwele
Mfutshane iinwele ezisikiweyo
Iwigi emfutshane yamadoda
Iglue yesikhonkwane seenzipho
Isibane sejeli se-UV
Iseti yobugcisa besikhonkwane
Ukuba ndingacebisa imveliso inye yokhathalelo lolusu, ndingacebisa ibhotolo yeShea ngaphandle kokuthandabuza!
Iindidi ngeendidi zemveliso yokhathalelo lolusu zizame kakhulu, thetha inyani uphawu olunamaxabiso akude kakhulu kwaye alunasiphumo sisahlukileyo.
Abasetyhini bathenga iimveliso zokhathalelo lolusu, bahlala "bezama", kunye nokudana kwemveliso yokhathalelo lolusu, kodwa abanako ukunciphisa ukuthanda kwethu ukuzama iintlobo ezintsha!
Mhlawumbi olu luhlobo lwabafazi!
Kodwa ibhotolo yeShea, ioyile yemifuno yendalo enezinto ezibonakala zilula, itshintshe indlela endijonge ngayo ekusebenzeni kweemveliso zokhathalelo lolusu.
Makhe sijonge ukuba yintoni ibhotolo ye-shea!
Ibhotolo ye-Shea luhlobo lweziqhamo zezityalo zasendle e-Afrika kangangamakhulu eminyaka. Yioyile yemifuno yemvelo esulungekileyo ekhutshiweyo kwaye egxilwe kwiindlela ezizodwa zobuchwephesha.
Olona lwakhiwo lwayo luqulathe iindidi zeeasidi ezingafumenanga asidi, ivithamin C, iziqhamo acid, ethambileyo kunye ne-asidi ye-ester elukhuni, ioyile ye-linseed kunye necebo lokucoca ilanga.
Zityebile kwizakhamzimba, inefuthe elikhethekileyo kukhathalelo lolusu!
Kube bubuhle ubuqhetseba ngeenkulungwane e-Afrika kwaye ngoku isetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zolusu ezivela kwiimveliso ezinkulu kwihlabathi liphela.
IZiko leSizwe loLwazi lweBiotechnology lipapashe isifundo esibonisa ukuba ibhotolo ye-shea ingumthombo obalulekileyo we-anti-inflammatory kunye ne-anti-tumor-compounds.
Olunye uphononongo, olupapashwe kwiJenali yaseMelika yoBomi bezeNzululwazi, lubanga ibhotolo ye-shea inyusa imveliso ye-collagen kwaye yabonisa iipropathi ezichasene nokwaluphala.
Izinto ezingafakwanga saponifiable kwibhotolo ye-shea, amaxesha angama-1-10 eoyile yesiqhelo yemifuno, anokukhawuleza enze ifilimu ekhuselayo kulusu, ukuthambisa, ukukhusela iscreen kubalulekile.
Ngenxa yokuthamba kwayo, ibhotolo ye-shea ilungele ulusu olubuthathaka, kubandakanya zonke iintlobo zolusu lomntwana nolomntwana, ethambileyo nengacaphukisi. Ukusetyenziswa kwabantu abadala, kunokugcina ukuthamba kwendalo kolusu.
Phila emantla uza kudibana nomoya owomileyo, ulusu lobuso luya kuyicola le nto. Kule meko, ibhotolo ye-shea lukhetho olungcono.
1.Umsebenzi wokulungisa: phelisa amabala, ukukroba, ukungalingani, amabala, njl.
Ibhotolo ye-Shea inomsebenzi wokuqinisa ukuvuselelwa kwezicubu zolusu!
Iyasebenza kukonzakala kolusu kunye namabala abangelwa kukudumba, uqhaqho, ukutsha, irhashalala, amanxeba kunye nokusikwa.
Iphinda inyibilikise iintloko ezimnyama, inciphise ii-pores, isuse amabala abomvu, kwaye inefuthe elikhethekileyo kulusu olungalinganiyo.
Ukuvuselelwa kweseli okunamandla kunye neempawu zokupholisa amanxeba kwibhotolo ye-shea kunegalelo ekukhuleni kolusu olusempilweni, oluqhelekileyo kunye nokutshintsha izicwili ezibomvu.
Ayisiyakhi kuphela ulusu olonakeleyo, kodwa ikwaphucula umbala wolusu kunye nokuqina.
Ibhotolo ye-Shea inokulungisa iphinde ithathe indawo yesikhumba esikrazukileyo, ukunciphisa ukubonakala kwamanqaku e-atrophic, ukuncipha ukuphelisa amanqaku, kunye nokunika ulusu umbala ophakathi.
Kufanelekile ukuthi ibhotolo ye-shea inokusombulula phantse zonke iingxaki zolusu eziqhelekileyo!
Ukuqinisa 2.Skin kunye imibimbi ukususa umsebenzi: ukuthintela ulusu ukwaluphala
Ibhotolo ye-Shea inyusa ukuvuselelwa kwesikhumba kunye nokuvuselelwa ngokuvuselela ukusebenza kweeseli zentsholongwane, ke oko kuyamisa kunye nokubuyisela umva iimpawu zokuguga kolusu njengemibimbi, imibimbi ejikeleze amehlo kunye nolusu olutshisayo!
Njengokuba imeko yokuguga inyamalala, ulusu lobuso luya kuba mpuluswa kwaye luqine.
Umsebenzi we-3.Whitening: ukunciphisa ukubala, ukubala amabala, kunye nokususa izangqa yamehlo amnyama
Ibhotolo ye-Shea ikhuthaza ukubanakho kwesikhumba ukukhula kweeseli ezintsha, kunciphisa ukubumba njengoko iiseli ezintsha zithatha indawo yezindala.
Ibhotolo ye-shea inokunciphisa amabala esikhumba abangelwa kukukhanya kwelanga kunye nokukhulelwa, ukulungisa ulusu olutshiswe lilanga, ukukhanyisa amabala amnyama kunye namabala, kunye nokubuyisa ulusu oluthambileyo nolumhlophe.
4.Isicelo esijikeleze amehlo sinokususa ngokufanelekileyo izangqa ezimnyama.
Umsebenzi wokuthambisa isondlo: thambisa ulusu olomileyo kwakhona
Ulusu lwakho luvelisa ioyile ephindaphindwe kalishumi kunama-40s nakuma-50s kunakwiminyaka engama-20. Oku kungakhokelela ekomeni, ekuphelelweni ngamanzi emzimbeni nakwimibimbi ngenxa yokunciphisa imveliso ye-oyile kunye nelahleko yokugcinwa kokufuma.
Ibhotolo ye-Shea ibuyisela ibhalansi elungileyo phakathi kwamafutha acid kunye namanzi kwaye ibuyisela ukufuma komile isikhumba.
Ukugqwesa ngokugcina ukufuma kolusu, ukwenza izicubu zisebenze, kulula ukungena kumaleko wederm, ukuthambisa kunye nokwenza ulusu lube lula.
5. Khathalela iinwele zakho
Ibuyisela ubukhazikhazi kunye nokuguquguquka kwendalo kweenwele, ukuphucula ngokufanelekileyo ukubonakala kunye nokubonakala kweenwele ezonakaliswe kukuthanjiswa, ukufakwa umbala, ukomisa okomileyo, ukukhanya kwelanga okugqithileyo kunye nezinye izinto ezingafunekiyo kwindalo.
Ngaba umntu onesikhumba seoli angayisebenzisa ibhotolo ye-shea?
Kholwa ukuba le ngxaki iyamxaka umntu wolusu olunamafutha, ujonge iimpembelelo zemilingo zazo zonke iintlobo zeoyile ezikhusela ulusu, kodwa ukhathazeke nangona kunjalo "zinamafutha" ziyarhoxa.
Olu luvo oluqhelekileyo lolusu olungaqondakaliyo!
Ngokwenyani, oko kubizwa ngokuba lulusu olunamafutha kunika ioyile rhoqo kuba ulusu aluswele ndawo "yegrisi" kubangelwa!
I-oyile yinxalenye ebalulekileyo yolusu, ukuba ulusu luswele ioyile, ukoma, imibimbi kunye noluhlu lweengxaki ziya kubakho.
Umntu wolusu olunamafutha uya kwioyile kunye nolusu olucocekileyo olugqithisileyo, abangele ioyile ngakumbi nangakumbi endaweni yoko, sisizathu sokuba igrisi ayonelanga kwaye ulusu luyakwazi ukuzimela.
Ukuba abantu abanolusu olunamafutha basebenzise kakuhle iimveliso zononophelo lolusu olunamafutha ukongeza ioyile efunekayo kulusu, banokulawula imeko yokufihla ulusu ngokugqithileyo.
Ke, abantu abanolusu olunamafutha banokusebenzisa ibhotolo ye shea.
Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nolusu olungathathi hlangothi nolomileyo, kuyacetyiswa ukuba ukusetyenziswa ngakunye akufuneki kudlule kubungakanani beenkozo zesoya, okanye ukudibanisa nezinye iimveliso zokhathalelo lolusu ukusebenzisa isiphumo nako kulungile.
I-Technique yokusebenzisa i-Shea Butter
Okokugqibela, ndishwankathela iingcebiso onokuthi ungazi malunga nokusebenzisa ibhotolo ye-shea ukuphinda kabini isiphumo!
1. Qiniseka ukuba ulahla entendeni yesandla kwaye uthambise ukufudumeza: emva kokucoca, kuqala daub toner, emva koko ulahle ubungakanani beembotyi zesoya ioyile yebhotolo ye-shea entendeni, thambisa ubushushu, emva koko uhlikihle ubuso!
Khumbula ukuba ungafaki ngqo ebusweni, kuba kulula ukufaka isixa esingalinganiyo sendawo esibangelwa kukugqabhuka kwamabala amabala.
Hlikihla ubushushu entendeni yesandla sakho kwaye ubuthambise ebusweni bakho, obunokuyiphepha ngokufanelekileyo le meko.
2. Qiniseka ukuba usebenzisa umyalezo wokuthambisa: Abantu abaninzi banokuthambisa nje ibhotolo ye-shea ebusweni babo kwaye bacinge ukuba yonke into izakulunga.
Ngokwenyani, naluphi na uhlobo lweoyile olukhusela ulusu kufuneka lisebenzisane nokuthanjiswa ukuze lube nesiphumo esihle.
Ukuphulula imizuzu emi-1-2 ngalo lonke ixesha.
Ukuthanjiswa kunokukhuthaza ukujikeleza kwegazi kulusu, ukomeleza ngokufanelekileyo ukufakwa kwebhotolo ye-shea!
3. Yifake ngetawuli eshushu ukuphinda kabini isiphumo!
Emva kokufaka ibhotolo ye-shea kunye ne-massageit ebusweni bakho ngetawuli eshushu kangangemizuzu eyi-1-2, iyakunceda ukuvula pores kunye nokwandisa ukufakwa!
Emva koko, sebenzisa icompress ebandayo kwitawuli ngamanzi abandayo ukunceda ukuvala ii pores!
Uya kumangaliswa xa ufumanisa ukuba ulusu lwakho lubomvu kwaye lubuthathaka!
Kwakungathi ndiza kuphuma kwivenkile entle!
Ukuba awundikholelwa, zama nje!
4. Sebenzisa ezinye ii-oyile eziyimfuneko ukuze zisetyenziswe kunye: Ibhotolo yeShea yeyona oyile isisiseko. Unokuhambisa ezinye iioyile ezifanelekileyo ngokudibeneyo, kwaye umphumo ulungile kakhulu.
Umzekelo, yongeza amathontsi ambalwa e-oyile efunekayo kwi-bhotolo ye-shea, enokuthi isebenze ngakumbi ngokuchasene nokwaluphala kunye nolusu olubomvu.
Yongeza ioyile yelavenda okanye iti yomthi oyile ukuze ulwe namabala.
5.Sebenzisa ngaphambi kokwenza imaski: abantu abaninzi bathambisa imaski ngqo emva kokucoca. Ngapha koko, indlela echanekileyo yeyokufaka i toner kuqala emva kokucoca, kwaye emva koko ufake isitshixo, kwaye ekugqibeleni ufake imaski!
Isinyathelo se-essence fluid sinokutshintshwa ngebhotela ye-shea, kamva unyuke uphinde usebenzise imaski yobuso, unokumangaliswa kukufumanisa, umphumo wokuthambisa imaski yobuso unokuphinda kabini, ulusu lususe ukuhombisa kwamanzi, lusengagcwele yimvakalelo yokutsha!
Esi kuphela kwesigqubuthelo esingakwaziyo ukufikelela kwisiphumo!
Ibhotolo yeShea yenza izimanga kulusu lwakho!
Emva kokusetyenziswa kwenyanga e-1 ukuziva utshintsho olucacileyo kumgangatho wolusu!
Andinalo uvakalelo oluninzi ngokumhlophe, kodwa ekulungiseni iingxaki zolusu ebusweni, umphumo ubalulekile: amanqaku amabala, amabala, aya kuncipha ngokuhamba kwexesha!
Olona luvo lukhulu kwinkqubo yokusetyenziswa yile: ulusu luya kuba mpuluswa ngokukodwa, lubuthathaka kwaye lukhazimle.
Kuyacetyiswa kubo bonke abantu basetyhini abafuna ubuhle, nokuba ungakanani ngeminyaka okanye imeko yesikhumba, ibhotolo yeShea lelona qabane lononophelo lolusu.
Uthotho lomzimba webhotela yeShea:
1.Shea ibhotolo yesandla, 75g
Iintsuku ezisi-7 zesithintelo solusu esilungileyo
Iiyure eziyi-8 zokufuma, ukufakwa ngokukhawuleza
Uhlaselo lwangaphandle, iingxaki zemisipha yomngcipheko: imozulu eyomileyo nengqengqelekayo, ukuchuba okomileyo, ukucoca okugqithileyo, ububomvu obunobuzaza, ukukhanya kwelanga okuqhubekayo, imigca emihle eguga
Ungayifaka njani imveliso yokuthambisa ayisebenzi! Ngenxa yokuba isithintelo solusu lwakho sonakalisiwe!
Ulusu olonakalisiweyo lunokukhokelela ekukhawuleziseni ukuhamba kwamanzi, umonakalo wangaphandle unzulu.
Kwaye ulusu olukhusela umqobo lunokuthintela ukuphulukana nokufuma, xhathisa ngaphandle kungenelelo.
Kukunceda ugcine isithintelo solusu iintsuku ezi-7.
Zityebile zizinto ezingenakuthelekiswa nanto, zinokuzalisa i-interstitium yeeseli, zondle ngokunzulu kwaye zilungise, zigcine ukuthamba kolusu.
Igcwele ivithamin E, ene-antioxidant enamandla.
I-2.Shea Butter Body Lotion, 30g / 50g / 100g
Ifanelekile kulusu oluqhelekileyo + ulusu olomileyo
Ukuthambisa, ukondla kunye nokungagcini iiyure ezingama-48
3.Shea ibhotolo ye-sunscreen, 30g / 50g
Iyasebenza kwiimveliso ze-sunscreen nakwimveliso yokulungisa emva kwelanga
I-shampoo ye-bhotile ye-Shea kunye ne-conditioner yeenwele, i-30g / 50g / 100g / 200g / 250g
Iishampoo ezinesondlo kunye neemeko zokumisa iinwele ezomileyo, iimveliso zokonwabisa iinwele emva kokufakwa umbala
I-5.Shea ibhotolo yobuso, 30g / 50g
Ilungele iimveliso ezichasene nokwaluphala, ikrimu yasebusuku, ulusu olubuthathaka kunye neemveliso zokhathalelo lolusu ezomileyo, iimveliso zasebusika
Ilungele isithende esithambileyo kunye nolusu lweenyawo.
6 imaski yemilebe yebhotolo ye-Shea, 30g / 50g
Ukulungele isondlo somlomo kunye nokuxhatshazwa.
7.Ibhotolo yomntwana oshushu, i-30g / 50g
8.Shea ibhotolo ulwelo isiseko, 30g / 50g
Iyanciphisa ukubonakala kwemigca ecikizekileyo kwaye iguqule ubuso bakho bube yinto engenasiphako kwaye egudileyo ukuze izithambiso ziqhubeke ngokulinganayo ukugqiba okungapheliyo.
9.Shea ibhotolo yomlomo, 30g / 50g
Ukucoca imilebe ngobushushu kunye nokondla okunesondlo
10.Shea ibhotolo yonyawo, 30g / 50g
Ukukhuhla iinyawo ukukhutshwa ngobunono kunye nokondla
11.Shea ibhotolo yonyawo, 30g / 50g
Ixesha Post: Apr-16-2021
Idilesi: Hayi. 4, Taijin Road, Xiqing Industrial Zone, Xiqing Dist, Tianjin, China